खाना खाएकै ठाउँमा थाल छोड्ने गर्नुभएको छ ? यस्तो बानीले कहिलै गर्न दिदैन प्रगती - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
खाना खाएकै ठाउँमा थाल छोड्ने गर्नुभएको छ ? यस्तो बानीले कहिलै गर्न दिदैन प्रगती
मानिसको सोंच कस्तो छ भन्ने कुरा उसका आनीबानीबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। मानिसका बानी उसको ब्यक्तित्वको ऐना नै हो भन्दा पनि हुन्छ । शास्त्रका अनुसार कतिपय सामान्य लाग्ने आनीबानी पनि अशुभ मानिन्छन्। यहाँ त्यस्तै केही आनीबानीको चर्चा गरिएको छ जुन अशुभ मानिन्छन्।
नुहाएपछि बाथरुममा गर्न नहुने काम: नुहाइ सकेपछि बाथरुममा कपडा यता उता फाल्ने गर्नु भएको छ भने यो अशुभ काम हो । बाथरुममा फोहोर गरेर राख्दा पनि चन्द्रफलका कारण अशुभ फल प्राप्त हुने बताइन्छ । बाथरुममा नुहाइसकेपछि फोहोर गरेर नछोड्नुस्।
खुट्टा घिसारेर हिँड्ने बानी खराव: कुनै पनि ब्यक्तिले जमिनमा खुट्टा घिसारेर हिँड्छ भने त्यस्तो हिँडाइ अशुभ मानिन्छ । यसो गर्दा राहूका कारण अशुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
खाना खाएर थाल छोड्ने बानी: खाना खाएपछि थाल खाएकै ठाउँमा छोड्ने बनी पनि अशुभ मानिन्छन्। यस्ता ब्यक्तिलाई सफलता प्राप्त नहुने र भैहाले पनि दीर्घकालीन नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ।
राति सम्म जाग्नु अशुभ: यदि कुनै ब्यक्ति विना कामले राति सम्म अनिदो बस्छ भने त्यस्तो ब्यक्तिलाई चन्द्रदोष लाग्छ। अशुभ फल प्राप्त हुन्छ। यस्ता ब्यक्तिले मानसिक तनाव पनि झेल्नु पर्छ। राति सम्म अनिदो बस्ने ब्यक्तिलाई अर्को दिन पनि समस्या हुन्छ।
पाहुनालाई चिसो पेय पदार्थ दिनुस्: घरमा आएको पाहुनालाई जहिले पनि चिसो पेय पदार्थ दिनु शुभ मानिन्छ। यसो गर्दा राहु दोष काटिन्छ।
घरमा आएपछि चिसो पानीले मुख धुनुस्: बहिर बाट आएपछि चिसो पानीले मुख धुनुस् यसले मनमा शान्ति ल्याउँछ र शुभ पनि मानिन्छ।